Yiphi indlela oPhumelela ngayo ukuQinisa? - Ukuthweswa Izidanga
Yiphi indlela oPhumelela ngayo ukuQinisa?
Xa ubeka ikepusi yakho yokuthweswa isidanga, unokuzibuza, 'Ziya ngaphi iindlela zokugqwesa?' Qhubeka ufunda ukuze ufumane impendulo yalo mbuzo kunye nolunye ulwazi olunomdla malunga nenquma lakho.
Ukunxiba iiTassels zokuthweswa isidanga kwiiNdawo ezichanekileyo
Yenza isidangainqumauye ekhohlo okanye ekunene? Amathanga okuthweswa izidanga aya ngasekunene kwekepusi yakho ngaphambi kokuba uphumelele. Kwezinye izikolo, uhambisa inquma ngasekhohlo emva kokuba uxhawulisile umntu onika idiploma yakho. Kwezinye izikolo, kuya kufuneka ulinde de inqununu ibhengeze ukuba iklasi yakho iphumelele ngokusemthethweni kwaye icele wonke umntu ukuba ayisuse ngexesha elinye.
Igalari yeZipho zokuthweswa izidanga
Izitayile zokunxiba zabaNcinci
Inquma lokuthweswa izidanga liuphawu lwempumelelo. Abanye bakholelwa ukuba kutheni ubeka inquma ngasekunene kukuba ulifumene ilungelo lokuphumelela. Ukuhambisa inquma ngasekhohlo emva kokuthweswa isidanga kungumfuziselo wokuwela usuka kwisikolo esiphakamileyo (okanye kwikholeji) uye kwelinye inqanaba ebomini bakho.
Kwixesha elizayo, ukuba ufumanaisidanga semastersokanye ugqirha, uya kubeka inquma lakho ngasekhohlo kwekepusi yakho yodaka. Awuyi kuflaza inquma; ihlala ngasekhohlo ngaphambi, ngexesha, nasemva kokuphumelela. Kungenxa yokuba ngesiqhelo, abagqatswa abafumana izidanga zabo zokuphela (okt i-master's okanye ugqirha) bafumana i-hood emele uqeqesho lwabo kwizifundo. Inkqubo ye- Inquma lithatha indawo yomsitho wokufaka ikhosi kwisikolo samabanga aphakamileyo kunye nenqanaba lesidanga sokuqala.
Ngelixa isithethe sinyanzela ukuba inquma linxitywe ngasekunene kwaye lihanjiswe ngasekhohlo emva kokuba ufumene idiploma yakho (okanye ukuqukunjelwa komsitho), qaphela ukuba ngamanye amaxesha izikolo ziya kukuyalela ukuba ubeke inquma ngasekhohlo. Ngokubanzi, oku kungenxa yokuba umfoti umfaki-zithombe usetelwe ukuthatha imifanekiso ngasekunene, kwaye bafuna ukuba ubuso bakho bubonakale ngokupheleleyo kukudubula okukhulu. Emva kwayo yonke loo nto, akukho mntu ufuna umfanekiso wokuthweswa isidanga obonisa inquma labo phakathi kobuso babo.
Gcina iTassel yakho njengoMqondiso weMpumelelo
Kanyeukuphumelelaiphelile, sukuphosa inquma lakho ebhokisini ulibale ngalo. Ziqhenye ngempumelelo yakho kwaye uyibonise njengesikhumbuzo sendlela omde ngayo. Abanye abantu bayifakile kwisakhelo esinefayile ye-umfanekiso ophumeleleyo. Abanye baya kuyijikeleza kwisipili sabo sokujonga ngasemva emotweni yabo. Naphi na apho ukhetha ukubeka inquma lakho, qiniseka ukulijonga rhoqo, kuba liyakukhumbuza ngempumelelo yakho kwaye likunike nethemba ngekamva.
Utywala Ukuchacha Emva Wena U U Uring Malunga I Paranormal Ukunikewa Izipho Zomntwana Iimoto Izilayidi
Uyenza njani i-virgin pina colada
Ulufumana njani uqhawulo mtshato eKentucky
Ngaba i-imeyile isebenza ngeKrisimesi
yeyiphi kwezi zilandelayo engengombala kumgangatho womdlalo we-twister?
Ucoceka njani ukubhaka kwigrisi kwiipeni ezingezizo ezentonga
indlela yokwenza umdaniso wenkukhu